प्रवासमा देशको चिन्ता उत्तिकै, सबैले संयमित रहन आवश्यक -
नेपालको बिकास, समृद्दी र राजनैतीक परिवर्तनको बारेमा प्रवासमा रहने हामी नेपालीहरुलाई पनि उत्तिकै चासो रहनु स्वाभाबिक हो । नेपाल एउटा राजनतिक कोर्श पुरा गरेर संघिय गणतान्त्रिक सहितको सम्मुन्नत नेपाल बन्नको लागि अघी बढीरहेको अवस्था छ । आजको यो घडीमा १० बर्षे जनयुद्द, १९ दिने जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा आफ्नो अमुल्य जीबनको कुर्बानी दिएर शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण महान शहिदहरु प्रती हार्दिक श्रद्दान्जली ब्यक्त गर्न चाहन्छु ।
हामी नेपाली जनताले २४० बर्ष भन्दा अगाडि देखी जरो गाडेर बसेको सामन्ती राजसंस्थालाई मिल्क्याएर सबै जनताको समान प्रतिनिधि हुने, अझ भनौ जनताले जनतालाई शासन गर्ने समानुपातिक समाबेशी संघिय गणतन्त्रको स्थापना गरेका हौ । यो प्राप्ती मामुली कुरा हैन । हजारौ जनताले बलिदानी दिएर ल्याएको गणतन्त्रलाई हामी प्रबासी नेपालीहरुको पनि उत्तिकै माया छ । तसर्थ हामी प्रवासमा रहने नेपालीहरु नेपालको राजनतिक घटना परीघटनालाई बिशेष चासोका साथ हेर्दै आफ्नो धारणाको निर्माण गर्दछौ । अथक प्रयास र संघर्षद्वारा जनताले ल्याएको गणतन्त्र नेपाली जनताको नासो हो न कि कुनै अमुक नेताको । गणतन्त्रको प्राप्ती सँगै अब नेपाली जनता नेपाल गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अधिकतम अधिकार जनतालाई प्रत्याभुत गर्दै समुन्नत नेपालको निर्माणको लागि द्रुत बिकास भएको वा हुँदै गरेको नेपाल हेर्न चाहन्छन । यसको लागि स्थीर सरकार अत्यावश्यक छ । नेपाली जनताले बिगतको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दै ८० प्रतिशत भन्दा बढीले प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारीको लागि सुझाब दिएको यसैको लागि हो । तर दु:खका साथ भन्नु पर्दछ, केही पार्टीका केही नेताहरुको अहमकार, डर र पदलोलुपले हामी फेरी उही पुरानो संसदीय पद्दतीमा धकेलियौ । त्यसको परीणाम नै हो आज ९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुनु । हामी नेपाली जनता स्थायी सरकारको लागि लड्यौ । हाम्रा नेताहरुले बिशेष गरी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका केही नेताहरुको कारण वाध्य भएर हामीले पुन एकपटक बहुमतिय संसदीय ब्यवस्थालाई अंगाल्नु परेको छ । ओली सरकार ढल्नुको कारण यही हो । अझै पनि केही बिग्रेको छैन । हामी सबै भएर प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारीको लागि आफ्नो आफ्नो स्थान बाट दबाब सिर्जना गरौ र स्थायी सरकारको निर्माणमा भूमिका खेलौ ।
बहुदलिय प्रतिस्पर्धामा सरकार आउँछ, जान्छ । माओवादी केन्द्रले सरकारका परिवर्तनका आफ्ना स्पष्ट भनाइ र कारणहरु जनतालाई भनिसकेको छ । हामी परिवर्तनका संबाहक, गणतन्त्रका अगुवा जनता, १७ हजार जनताको बलिदानी भएको गौरबशाली पार्टीका कार्यकर्ता आफ्ना कार्यकर्ता र नेताहरुलाई घुमाउरो पाराले पुराना सत्ताका पुराना कानुन अड्चनहरु देखाएर फसाउने खेलको बारेमा पूर्णत जानकार छौ । हिजो एउटा परिस्थितीमा एउटा कालखण्डमा युद्दकालिन अवस्थामा केही निर्दोशहरुको ज्यान गएको पक्कै हो । संख्यात्मक रुपमा हेर्ने हो भने एमाले र काँग्रेसका कार्यकर्ता भन्दा बढी क्षति हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्रको भएको छ । हाम्रा कैयौ कार्यकर्ता अनाहकमा मारिएका छन । बेपत्ता पारिएका छन । घाइते छन । बलात्‍कृत भएका छन । कैयौ टुहुरा भए त कैयौ बिधवा बने । कैयौको काख रित्तियो । के ती हाम्रा पार्टीका जनता चाँही नेपाली जनता हैनन ? यस्तो अवस्थामा गणतन्त्रको सुनिश्चितता पश्चात हामी १२ बुँदे शान्ति सम्झौता गरेर शान्ति प्रकृयामा आएका हौ । हामीले सामन्ती राजतन्त्र हटाउछौ, अब जनताको गणतन्त्रमा समुन्नत नेपालको बिकास गर्छौ भनेर शान्ति प्रकृयामा आएका हौ, शान्ति सम्झौता गरेका हौ । कुनै खेलाची खेल हैन र थिएन ।
क्रान्तिको बेला या पछी पनि जुनसुकै पार्टीमा जुनसुकै बेलामा नेता तथा कार्यकर्तामा साँस्कृतिक बिचलनहरु आउन सक्छन । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीले आवश्यक कारबाही गर्दछ । गरेको छ । त्यस्ता बिचलन नेकपा एमालेमा पनि उत्तिकै लामो र नेपाली काँग्रेसमा पनि लामो फेहरिस्त छन । तर त्यस्तालाई पार्टीले बचाउने भन्दा पनि कारबाही गरिनु पर्दछ, गरेको छ । हामी पटक पटक यस्ता घटनाहरुलाई उचाल्ने पक्षमा छैनौ। पीडितले न्याय पाउनु पर्दछ, पिडकलाई कारवाही हुनु पर्दछ । तर प्रवासमा आफु पनि त्यस्तै साँस्कृतिक बिचलनमा होमिएर नेपालमा भएका पुराना घटनाहरुलाई एक पक्षिय उचाल्ने किन ? सबैभन्दा पहिले म ठीक छु कि छैन भनेर हेर्न आवश्यक छ कि छैन ? हामी र हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ता के कस्ता छन भने हेर्नु पर्छ कि पर्दैन ? सोही पार्टीले नगरे पनि मुल्यांकन आम जनताले त गरिरहेका हुन्छन ।
तसर्थ, हिजोको अवस्थाको बारेमा प्रवासमा बसेर एकले अर्कालाई आरोप र आक्षेप लगाएर भाईचारा धमिल्याउनु अघी हामी सबैले संयमित हुन जरुरी छ । एकोहोरो कसैलाई गाली गरिरहनु भन्दा अगाडि “म र हामी” को बारेमा पनि सोच्न जरुरी छ । माओवादी केन्द्रलाई हत्यारा र जङलीको उपमा दिनु अघी २८ सालमा झापा आन्दोलनको नाममा गरिएको असफल कम्युनिस्ट आन्दोलन के हो, किन गरियो र के उपलब्धी भए भनेर किन नसोच्ने ? २८ सालमा झापाका किसानहरुलाई ६ इन्च गिड्दा क्रान्तिकारी हुने र उनिहरुलाई नेपालको कानुनले माफ गरिदिने तर ५२ साल देखी ६१ साल सम्म भएका युद्धकालिन मुद्दालाई तिनै नेपालको कानुन लागु हुने कस्तो न्याय प्रणाली हो ? नेपाली काँग्रेसले पनि प्रजातन्त्रको प्राप्तीको लागि २/२ पटक हतियार उठाएको ईतिहास हैन ? अनी उनिहरुलाई नेपालको कुनै कानुन लाग्दैन ? याद होस्, हामी माओवादीहरु त नेपालको कानुन मान्दैनौ भनेर हतियार बोकेका थियौ । आज देशमा परिवर्तन भएपछी शान्ति सम्झौता गरेर आएका हौ ? शान्ति सम्झौता भनेको के हो ? माओवादीहरुलाई जेल हाल्ने भनेको हो ? यस्ता कुराहरु हामी माओवादीहरु मान्न त के सुन्न पनि तयार छैनौ ।
हामी प्रवासमा छौ । देशको बिकासको बारेमा चिन्ता गरौ । समृद्दीको बारेमा चिन्ता गरौ । स्थायी सरकारको बारेमा चिन्ता गरौ । त्यसको लागि प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारीको लागि लबिङ गरौ । प्रवासमा नेपालीहरुलाई परेको दु:ख कष्टमा साथ दिऔ । सबैलाई सहयोग गरौ । सामाजिक संजालमा तल्लो स्तरमा झरेर एक आपसमा हत्यारा, जङली, टाउको कट्टा जस्ता आरोपहरु लगाएर एक आपसको भाईचार सम्बन्ध नबिगारौ । हिजोको दिनमा म, मेरा संगठनबाट भए गरेको भए त्यसलाई यसै भनाइबाट फिर्ता लिदै आगामी दिनहरुमा सबै बिचार बोक्ने आमुल परिवर्तनका संबाहकहरु एक हुन जरुरी भएको ठान्दछु । सँग सँगै हामीले यदी राजनैतीक वा जुनसुकै नाम र आडमा भएका वा हुँदै गरेका हुण्डी, तस्करी, मानब ओसार पसार जस्ता अपराधजन्य कार्यलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने बारेमा सहकार्य गर्न जरुरी छ । गल्ती सबैका हुन्छन, आत्माआलोचित बनौ र सहकार्य गरौ । म कुनै राजनैतिक दलको भातृ संगठनको जिम्मेवार ब्यक्ती भएको हुनाले यो जिम्मेबारी बोध गरेको हुँ । यो कुनै माफि, पश्चाताप वा अन्य केही हैन । यस्तै बोध सबैले गर्न जरुरी देखेको छु ।
प्रवासमा हुने गरेका बिबिध घटनाहरुमा साथमा साथ् दिदै अघी बढौ । ब्यक्तिगत आरोप र आक्षेपलाई बन्द गरौ । नेपालमा भएका राजनैतीक घटनाहरुलाई संयमित भएर बिरोध र समर्थन गरौ । देश बिकासमा खबरदारी गरौ । यसैमा हामी सबैको भलो हुनेछ ।
(पौड्याल माओवादी केन्द्र निकट नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्च , युएईका अध्यक्ष हुन ।)
नेपाल बायुसेवा निगमले फेरी सुरु गर्ने भयो दुबई उडान
१४ कार्तिक २०७३, आईतवार २०:२४ October 30, 2016 wwwmophasal